Europa Beach Ihhotela 4 * (Greece / Crete): Izibuyekezo
Crete - it is a resort ethandwa kakhulu iholidi beach, ngakho kulesi sihloko sifuna ukukhuluma mayelana kwelinye lamahhotela esiqhingini. Europa Beach Hotel, esisogwini olusentshonalanga, izivakashi eziningi, enikeza ngasolwandle iholidi emangalisayo.
Nasi leli hhotela ...
Europa Beach Ihhotela itholakala eduze nedolobhana Analipsi, phakathi imizi Heraklion (24 km) kanye Hersonissos (6 km). Akunzima ukuthola ehhotela ngoba ka Heraklion Airport kuyinto 22 amakhilomitha away.
Isakhiwo ine ngezizathu ezinhle olunzulu amasundu izimbali, lapho kumnandi ukuthatha uhambo. Ihhotela siqukethe Bungalows eziningana, esisogwini komugqa wokuqala. Waqale wavula ngo-1992 futhi kusukela ngaleso sikhathi njalo ngonyaka ithola izivakashi eziningi. Europa Beach Hotel itholakala kude umsindo befuna ukuthi inzuzo yayo elingenakuphikwa, ngoba igxile ethule iholidi umndeni.
Europa Beach Ihhotela inikeza izihambi 277 amakamelo, phakathi lapho kukhona amafulethi kule mikhakha elandelayo:
Standard ikamelo double (endaweni 25 sq. M.) Igumbi ifakwe ngamunye elawulwa air conditioning, indlu yangasese, kuvulandi noma ithala. Kukhona ithelevishini, ucingo, i-TV satellite, ikhabethe, efrijini, hairdryer futhi iphephile.
Standard Kathathu has a isethi ephelele ezifanayo futhi imibhede emithathu.
Zonke amakamelo zenzelwe yendabuko isitayela engumKrethe, abasakwazi libanzi futhi zikhululekile.
Europa Beach ke Ihhotela 4 * (Crete) inikeza izivakashi zalo ukusizakala Zonke womanyano. Yokudlela Ihhotela likuvumela kokubili bendabuko ukudla engumKrethe kanye best cuisine ngamazwe. Nsuku zonke, ihhotela linikeza izinketho eziningana for inhlanzi nenyama izitsha, njalo eziningi imifino kanye salads kwasemini kanye dinner futhi ukhonza izinhlobo ezinhlanu u-ice cream. Ukudla kuyinto fresh njalo futhi ezihlwabusayo kakhulu. Oweta e yokudlela kuyashesha kakhulu, cishe awuboni. Zonke womanyano kuhlanganisa zonke iziphuzo e yokudlela main nesigaxa ZOKUBHUKUDA (ikhofi, itiye, utshwala, cocktail).
Europa Beach Ihhotela 4 * (ka. EKrethe, Heraklion) has a endaweni enhle enkulu enezindonga emithi yesundu eziningi nezitshalo eziqhakazayo. Ihhotela has ezimbili ongaphandle okubhukuda abadala futhi omunye izingane echibini, eduze okuyinto bar. Le ndawo ukuzilibazisa ifakwe izambulela futhi sunbeds. Esikhathini kwamahhotela izivakashi nge-Wi-Fi, kukhona igumbi umthwalo, yokupaka, eziqashisayo imoto endaweni, zokuhlanza owomile nelondolo amasevisi.
Njengoba sishilo, Europa Beach Ihhotela 4 * (Analipsis) eyakhelene emzaneni, lapho ingqalasizinda ithuthukiswe kahle. Kukhona nezitolo ezinkulu, izitolo, amathilomu nezindawo zokudlela (uma uthenge ngaphandle uhambo ukudla). Futhi eceleni kwehhotela lethu kukhona sebhasi, ngakho ukuthola ukuthi Heraklion ngeke kube nzima. Kulabo amaholide abangafuni ukusebenzisa ezokuthutha umphakathi, ngaphansi emasangweni ehhotela zikhona njalo amatekisi ukuthi kuzokusa yimuphi ukuphela.
Europa Beach Ihhotela (Analipsi, Hersonissos) 4 * inikeza imisebenzi eminingi yezemidlalo ukuze izivakashi zayo, futhi kusihlwa ukujabulisa show hlelo. Ihhotela has a Animators lovely futhi bejabule. Ngemva kokudla kwakusihlwa, ngezinye izikhathi eza abaculi bendawo kokwenza ngesiGreki hits.
Ithimba izithombe izilimi ezihlukahlukene kakhulu, kodwa Russian engekho. Izingane asebenzayo abadala nje kuphela kodwa futhi izingane.
On insimu has siqu esikhungweni sezempilo yayo lapho izivakashi uyakhululeka sauna, ukwelashwa kahle, aromatherapy futhi massage. Ihhotela likuvumela izivakashi inkantolo ithenisi, ibhayisikili sokuqasha. Izivakashi ungadlala table tennis, volleyball, amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela eholwa ukwenziwa Kwezithombe Ezinyakazayo.
Coast futhi ebhishi
Inzuzo enkulu ye eziyinkimbinkimbi indawo yayo ogwini. Europa Beach Ihhotela 4 * Ihhotela esisogwini Umugqa wokuqala ukufinyelela ebhishi, udinga nje kokuwela umgwaqo. Yena ngokuphelele ezingaphili, omunye angase athi ngisho ukuthi ehlane, kodwa ngoba ukuba khona kwakhe akuzange kumenze ngokuphazamiseka.
Isakhiwo ine lolwandle ayo yangasese, okuyinto ejwayelekile yanoma yimuphi ehhotela European. Abobulili ihhotela kukhona elula encane ogwini, kodwa hhayi ifakwe futhi has a lot of amatshe. Chud ku prostilaetsya lolwandle omkhulu kamasipala namakhefu akhokhelwayo sunbeds nezambulela, kodwa ukuthatha kubo akudingekile. Ungakwazi ukuhlala emthunzini noma ilanga. olunesihlabathi zasendaweni ebanzi kakhulu futhi emuhle nge entry mnene olwandle. Kuyinto ukhululekile kakhulu iholidi ne izingane. Sea engajulile ngokwanele ukuya isidingo ukuya kude ukujula. Kodwa izingane libe yindawo engcono futhi abacabangi. Beach omkhulu kakhulu futhi kukhona njalo isikhala esiningi.
Okuncane resort ...
Crete - isiqhingi esihle, lapho ungakhululeka bese uvakashele Uhambo eziningi. Kukhona emangalisayo ulwandle enhle, amabhishi omkhulu ububanzi, izihlahla zesundu oluhlaza, ezihosheni, izintaba amaningi ilanga. Abantu bakule ndawo inobungane futhi zihlale wamukelekile. Life esiqhingini ageleza kancane ...
Crete amumethe ezikhangayo. Lapha ziziningi kangangokuba kungabikho muntu owake iholide akwanele ukubona konke. Izivakashi ukujabulela uhambo Palace ezidumile Knossos, in the uxhaxha we Minotaur, ku eSamariya Gorge. Izingane eziyojatshulelwa nokuhamba Annapolis Waterpark. Ayikho ezithakazelisayo kancane emhumeni kaZeyusi emhumeni Melidoni, Phaistos Palace.
weqiniso abathandi yezitolo bayokwazisa izimpahla zendawo. Crete ukuthengisa izinto ezimangalisayo nge ngezandla lace, izingubo ezinhle kusengutsheni yoboya, izingubo zokulala kanye semvu mata, isikhumba nezicathulo kanye izesekeli.
Kufanele nakanjani ukuthenga izimonyo yemvelo yendawo enziwe ngamafutha omnqumo, izimila zasolwandle kanye namakhambi. Crete liyaziwa imihlobiso yegolide. Lapha badayisa Kusaphazwa. Ngo imigexo izitolo ngokuvamile ungakwazi ukuthenga izinto okukhethekile. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi lapha kwamukeleka yonke indawo ukuhlabana. Lokhu akusebenzi izimakethe kuphela, kodwa futhi izitolo kanye nezitebele zamahhashi. eziyizikhumbuzo Kuhle hambo ukusuka eKrethe kubhekwa itiye entabeni, ibhotela, iminqumo, uju, ugologo newayini. Futhi abaningi zezitolo babe izitolo lemikhiqizo abadumile, yokuthengisa kuzo yilezi kabili ngonyaka (July nango-January).
Europa Beach Ihhotela 4 *: Izibuyekezo
Ukukhuluma ehhotela, ngokuqinisekile ufuna ukususa isikhalazo kuzivakashi izivakashi yayo usuzazi kangcono ngayo. Ngokwe-izivakashi, eyinkimbinkimbi yakhelwe lonke ezolile kakhulu futhi kukalwa. Active intsha lapha cishe ngeke uwujabulele. I akuxhomekile eyinhloko abahambi - omdala (osethathe umhlalaphansi) izivakashi ezivela eFrance, kweJalimane neSpain, futhi eminye imikhaya nezingane, kuncane kakhulu Russian. Ihhotela itholakala kude nomuzi, eduze edolobheni elincane, okuyinto has konke ungase udinge ukuphumula. Hersonissos ubhekwa maphakathi ukuzijabulisa eKrethe, ngakho befuna okuthile okuthakazelisa ungaya khona. Leli dolobha amakhilomitha ayisithupha nje kusukela ehhotela.
Eduze eziyinkimbinkimbi kukhona ezokuthutha stop umphakathi, lapha ungakwazi ukushayela waya edolobheni eliseduze. Ngaphezu kwalokho, ihhotela kungaba ukuqasha imoto ukuhlola lesi siqhingi, kuyindlela elula kakhulu ukuhamba. Namanje kungenzeka ukuthatha itekisi.
Ihhotela has a endaweni enhle futhi uzilungise, lapho abaningi olunothile amasundu zezimbali. Ukudumisa kubafanele abaqotho ahlukene ubhoko eziyinkimbinkimbi. Bazinze amakamelo isifika masinya, akunandaba kuwe. Ngisho noma ufika phambi ihora ezimisiwe, noma kunjalo uzonikezwa okhiye indlu.
Izivakashi abaye bavakashela ihhotela, uqaphele umhlobiso amakamelo nesizotha. Zonke ifenisha akuyona entsha, kodwa zisesimweni esihle. I amakamelo ngempela ukhululekile futhi anelisekile ngesitayela engumKrethe. Lesi sakhiwo sinamagumbi ezimbili ezintathu storey Bungalows, ukuze ukwazi ukukhetha i-esitezi phezulu, ukunikela imibono enhle kolwandle.
Ihhotela nezincekukazi ukwenza umsebenzi oncomekayo nomsebenzi wawo, amafulethi bahlanza nsuku zonke, awunankinga ushintsho zokulala kanye amathawula Kukhona futhi. Ngokuvamile, amakamelo inakekelwa kahle futhi ihlanzekile, Nokho, nesingakhangi.
Kangakanani ibhizinisi ukudla Europa Beach Ihhotela 4 * (Crete)? Izibuyekezo zezivakashi ku umsoco - kungcono ngokuvamile enye yezinkinga inkani kakhulu. Nokho, ongoti bethu ukule umqondo angabhekwa okuhlukile. Ngokusho izivakashi, ukudla yokudlela esungulwe ezingeni elifanele. On the amatafula kukhona njalo izinhlobo eziningana izinhlanzi izitsha, inyama, eziningi imifino nezithelo. Ngeshwa, kukhona isobho lethu evamile, iphalishi kanye isobho, kodwa eKrethe azilona neze ngomumo. isobho Local okuningi okufana umhluzi. Ezinye izihambeli ukuthi kukhona ezihlukahlukene ku imenyu, kodwa iningi izivakashi bayajabula kakhulu ngezikhathi zokudla. Nokho akufanele sikhohlwe ukuthi eziyinkimbinkimbi has izinkanyezi ezine, hhayi emihlanu.
Izingane kanye nabantu abadala ujabulele Ukukhetha ezinhle okumnandi ice cream sekudla kwakusihlwa, ibhulakufesi. I bartenders pool ibha ukulungiselela Cocktails kakhulu. Oweta e yokudlela main umsebenzi oncomekayo nge umsebenzi masinya ukukhonza amakhasimende. Bahlale bekulungele friendly, kanye nazo zonke ezinye izisebenzi.
I umqondo jikelele eyinkimbinkimbi
Europa Beach Ihhotela 4 * kungaba yindawo enhle okuphumuzayo beach holiday walinganisa. Kuyinto efanelekayo kulabo izivakashi efuna ehhotela eduze lolwandle. Isakhiwo ine Interiors zikanokusho futhi amakamelo zikanokusho, kodwa ngikwenze ngokugcwele isimo salo four-star, ukunikela abahambi amakamelo ahlanzekile nokudla okuhle.
Ihhotela esisogwini olusentshonalanga ukuya ebhishi, kumelwe kokuwela umgwaqo. Ibhishi phambi eziyinkimbinkimbi has a phansi enamadwala, eziningi kangaka uncamela ebhishi kamasipala. I strip ugu kuyinto enhle ukuze kuhlale kuyinto isikhala esiningi akekho izixuku.
Emini Animators ukubungaza izipesheli izinhlelo ezemidlalo, club izingane '. Kusihlwa, izivakashi babe abahlanganyeli kule show kusihlwa, futhi izingane ukuhlela mini-disco. Wezingane izithombe kuyinto ngesiNgisi, kodwa akuvimbeli ukubungaza izivakashi abasha.
Europa Beach Ihhotela 4 * - kuyinto isabelomali hotel enobungane. Uma ukhathele ukuphila edolobheni futhi bafuna uphumule phezu kolwandle, ke ungakhetha ngempumelelo lesi eziyinkimbinkimbi. Kodwa intsha asebenzayo ngifuna ukuzijabulisa asebenzayo, esikhokhela kangcono ukunakekela ehhotela Heraklion futhi Hersonissos.
Amahhotela ase-Astana. Amahhotela ase-Astana eklasini lomnotho. Amahhotela amancane
Emahhotela aphambili e-Turkey - isinqumo omkhulu
Blue Camelot Beach Ihhotela 4 *, Turkey: ukubuyekezwa, incazelo ehhotela, asesigabeni
Manaus Ihhotela 3 * (Mallorca, Spain): incazelo, amakamelo, ukubuyekezwa
Ihhotela Sentido Sandy Beach 4 * (Cyprus / Larnaca) - izithombe kanye nokubuyekeza
Princess Seaview Resort & Spa Indawo 4 * (Phuket, Thailand): Ihhotela Izibuyekezo
Yini umbala izinwele ngeke asondele emehlweni oluhlaza? Baningi impela ongakhetha
I-Sunny Beauty Palace 4 * (Sunny Beach, Bulgaria): isithombe nokubuyekezwa
Lapho wathwebula "White Dew" futhi ingxenye movie wesibili?
Kuhle izidlaliso angamaduna imidlalo
Kukankosikazi Unforgettable wachitha eziqhingini-Indian Ocean
Isayensi Postnonclassical nendawo yayo ifilosofi nesayensi
Kanjani ukuqeda ubuhlungu, uma ugijima phezulu umunwe noma izinsini
Okuncane isabelomali umthengi zomkhaya abantu 4. Umqondo we ubuncane isabelomali umthengi nokubaluleka kwalo. Yini kubhajethi umthengi ubuncane?
Ikhamera Intraoral - okunokwethenjelwa umsizi wamazinyo